Booliska Dalka Holland oo Jiirar u Tababaray in ay Uriyaan Dambiyada | Berberanews.com
Home Qubanaha Booliska Dalka Holland oo Jiirar u Tababaray in ay Uriyaan Dambiyada
Booliska Dalka Holland oo Jiirar u Tababaray in ay Uriyaan Dambiyada
Qubane-(Berberanews)-Bilayska dalka Holland, ayaa jiirar u tababartay in ay baadhaan dambiyada fud fudud ee u baahan in la uriyo mukhadaraadka iyo waxyaabaha qarxa, iyadoo la damacsan yahay in lagu sii daayo goobaha dambiyada looga shakiyo.
Sarkaal ka tirsan bilayska dalkaas oo la yidhaa Monique Hamershlag oo mashruucan gacanta ku haya, madaxna ka ah xarunta ikhtiraaca bilayska ayaa war-murtiyeed uu soo saaray ku sheegay in ay tahay markii ugu horraysay ee caalamka jiirar loo tababaro in loo isticmaalo baadhista bilasyku wadaan.
Jiirarkan waxyaabaha ay badhaan waxa ka mid ah in ay ururiyaan daroogooyinka iyo waxyaabaha qarxa, waxaanay ka kharash yar yihiin lacagta la siiyo Eyda bilayska la shaqaysa oo toddoba bilood la tababaro, halka jiirarkana tababarkoodu qaatay 15 maalmood.
Jirirkan waxa lagu hayaa shabagyo, kuwaasoo loogu shubo suntan hubka si ay u aqoonsadaan waxyaabaha qarta, una urin karaan, waxaana lagu tababaray inay markay urta hubka dareemaan xagiisa u dhaqaaqaan.
Jiirarkan maaha sida Eyda oo dambiilayaasha ma ugaadhsan karaan, balse waxa loo isticmaala in ay urta wax ku soo saran, kuwaasoo si fudud ku ogaan kara waxyaabo meelo fog ku qarsoon amma dhulka lagu aasay hoostiisa.
Eyda iyo jiirarku maaha xayawaanka kaliya ee waaxaya bilayska la shaqeeya, balse waxa sidoo kale shinida ayaa loo tababara in ay uriso waxyaabaha qarxa.
Previous articleFanaanada Hibo Nuura oo xaflad sagootin ah loogu sameeyay xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya
Next articleDhegayso nuxurka warbixin Guddi hoosaadka Nabadgelyada iyo Difaaca Guurtidu ka akhriyeen fadhigii maanta